Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho
Allaha u naxariistee waxaa habeenkii xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka mid ahaa odayaasha sida weyn looga yaqiinnay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Eheleda Nabadoonka oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay geeridiisa, waxayna inoo sheegeen inuu muddooyinkii ugu dambeysay xanuunsanayay islamarkaana uu ku jiray isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho.
Allaha u naxariistee Nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa ahaa afhayeenkii odayaasha beesha Hawiye, waxaana uu ifka kaga tagay caruur badan, oo qaarkood masraxa siyaasadda weli ku jira.
Madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir uga tacsiyeeyay geerida Nabadoonka, waxayna Alle uga baryayaan inuu janatul Firdowsa ka waraabiyo.
Si kastaba ha ahaatee, Nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa lagu xusuustaa halgankii weynaa uu la galay ciidamadii Itoobiyaanka ee sida xoogga aheyd kusoo galay magaalada Muqdisho, isagoona mar lagu xiray saldhigga ciidamadii Itoobiyaanka ee ku yaallay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Allaha u naxariistee, meydka Nabadoon Axmed Diiriye ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.